​वीपी प्रतिष्ठान डुवाउने षडयन्त्रमा पूर्वउपकुलपति दास
Tuesday, 29 Aug, 2017 12:07 PM
धरान, १३ भदौ । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. बलभद्र दासले आफू उपकुलपति वन्न नपाएको झोंकमा प्रतिष्ठानको हितविपरीत कार्य गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानलाई करोडौंको नोक्सान हुन थालेको छ ।
विगत पाँच बर्षसम्म प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएका डा. दासले यसपटक पनि भीसी वन्न ठूलो कसरत गरेका थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालमा अनगिन्ती आर्थिक अनियमितता गरेर अख्तियारको कारबाहीको सूचीमा परेका कारण तत्कालीन सरकारले उनलाई भीसी बनाएन । सरकारले प्रतिष्ठानकै पुराना वरीष्ठ डाक्टर आर के रौनियारलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि डा. दासले नयाँ भीसीलाई काम गर्न नदिन विभिन्न षडयन्त्र गरेर दुःख दिन थालेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु वताउँछन् ।
सरकारले रौनियारलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्नेवित्तिकै उनले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति नियमसंगत नभएको भनी मुद्दा हालेका थिए । तर सर्वोच्चले सो नियुक्ति नियमसंगत नै भएको भनी फैसला सुनाएको छ । त्यसपछि उनले काठमाडौ बस्दै आएकी छोरी तान्या दासको नाममा नयाँ भीसीले एमबीबीएसको लागि भारतीय विधार्थीको भर्ना पुनः गराएर आर्थिक अनियमितता गर्न लागेको भनी विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन लगाएर भर्ना प्रक्रियालाई विथोल्ने कोसिस गरेका छन् । तर उक्त भर्ना प्रक्रियाका बारेमा पनि उच्च अदालतले प्रतिष्ठानकै पक्षमा फैसला सुनाएर प्रतिष्ठानको १६ करोड रुपैयाँ घाटा हुनबाट वचाएको छ । प्रतिष्ठानको नियमित भर्ना प्रक्रिया अनुसार बर्षमा २० जना भारतीय विधार्थीका लागि कोटा छुट्याइएको हुन्छ । तर यस बर्ष २० मध्ये ८ जना मात्र भारतीय विधार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन आएकाले पुनः परीक्षाको तयारीमा प्रतिष्ठान रहेको थियो । तर यसैबीच डा दासले मुद्दा हालेर प्रतिष्ठानलाई भारतीय विद्यार्थीवाट उठ्ने झण्डै १६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउने षडयन्त्र गरेको कुरा रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बजेटैबिना अर्र्बौ रुपैयाँको टेण्डर
४० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ६० प्रतिशत जति नेपाल सरकारको अनुदानबाट संचालन हुँदै आएको वीपी प्रतिष्ठानमा हाल झण्डै अढाई अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ४ सय शैयाको मातु शिशु अस्पतालको भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ । रसुवा एण्ड शर्मा निर्माण सेवाले लिएको सो भवनको काम अहिले झण्डै ४० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । तर ठेकदारले भुक्तानी भने रु. ३० करोडमात्र पाएका छन् । समयमा भुक्तानी नपाएका कारण ठेकेदार कम्पनीले बेलाबेलामा काम रोकिदिने धम्की दिन थालेको छ । तर नयाँ उपकुलपति रौनियार भने आफूलाई यो ठेक्काले साह्रै अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन् । स्रोत नै नभएको अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याएर भुक्तानी दिनु ? अव जसले ठेक्का दिएको हो, उसैले दिन्छ होला नि, उनले भने । नयाँ भीसीले यसो भन्नुको कारणबारे प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई सोध्दा पुराना भीसी दासले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिई आफनो सिनेटको बैठकबाट ७६ करोडको बजेट पास गराएका रहेछन् । आफू उपकुलपतिबाट बिदा लिनुपुर्व मोटो कमिसन खानकै लागि प्रतिष्ठानसँग पैसा नहुँदानहँुदै पनि हतारमा ठेक्का दिएका थिए । अढाई अर्ब बजेटको ठेक्कामा पहिलो किस्तास्वरुप डा दासले २० करोड मात्र भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जुन २० करोड पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीको संचयकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । नयाँ भीसी आएपछि अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गरेर थप १० करोड ठेकदारलाई भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी रकम कसरी तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानसँग अहिलेसम्म कुनै योजना नभएको रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठ वताउँछन् । यता विभिन्न जालझेल गरेर रसुवालाई एकलौटी ठेक्का मिलाई दिएबापत डा. दासले सुरुमै १५ प्रतिशत कमिशन ठेकदारबाट भुक्तानी लिइसकेकाले ठेकदार अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् ।
यता नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना यति ठूलो रकमको परियोजना शुरु गरेकोमा डा. दासमाथि अख्तियार र अर्थमन्त्रालयले चाँडै नै कारबाही गर्ने भएका छन् ।
यता रसुवा एण्ड शर्मा कम्पनीलाई हतारमा सेटिड मिलाएर अनियमित तवरले ठेक्का दिएकोमा सो ठेक्का बदर गर्न अन्य ठेकदारहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् । सो मुद्दा हारेमा निर्माणाधीन भवनको भविष्य के हुने हो कसैलाई थाहा छैन ।
स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविना अढाइ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएकोबारेमा रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ– ‘सुरुमा ठेक्का दिंदा स्टीमेट आएको थिएन, दोस्रो बर्ष स्टीमेट आइसकेपछि बजेट छुट्याएकोमध्येबाट टेण्डर भयो, त्यसपछि मन्त्रालयले क्रमशः दिंदै जाने भनेर मन्त्रालयले दिंदै गयो । बजेट दिन थालेपछि मन्त्रालयको स्वतः स्वीकृति हो । बजेट दिइरहेको छ ।’ ३० करोडमात्र भुक्तानी भएकोबारेमा उनले भने, ३० करोड भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
अरु दुई ठेक्का पनि अलपत्र
डा. दासले आफ्ना सहयोगी सिभिल इन्जिनियर सुशीलकुमार झा मार्फत् आफैंले ठेक्का लिएको साढे सात करोडको होष्टल निर्माण र १३ करोडको औषधी पसल भवन बनाउने कार्य पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ । गत बर्ष उनी आफैंले २ करोडको बजेटमा बनाउन लागेको फार्मेसी भवनको ठेक्का रद्द गरी फेरि कमिसनका लागि १३ करोड बजेट बनाएर झाको कम्पनीलाई ठेक्का पारिदिएका थिए । तर प्रतिष्ठानसँग बजेट नभएर निर्माण कार्य रोकिएपछि शक्तिकेन्द्रमा फोन गर्न लगाएर पैसा निकासा गराउन वर्तमान भीसीलाई दबाब दिन थालेका छन् । यता होष्टल निर्माणका लागि पनि दासले आन्तरिक स्रोतबाट वजेट प्रयोग गरेका थिए तर अहिले बाँकी पैसा दिन नसकेर त्यसको काम पनि रोकिन पुगेको कुरा डेपुटी रजिष्टार अमित श्रीवास्तव बताउँछन् । एक लेखा अधिकृतले भने–सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति नै नलिई धमाधम मनपरी दिएका ठेक्कामा प्रतिष्ठानले कसरी पैसा दिन सक्छ ? अझ डा. दासले आफू जाने बेलामा मुटु रोगसम्बन्धी उपचार केन्द्रको भवन निर्माणका लागि पनि विनाबजेट टेण्डर गर्न लागेका थिए तर उनको पदावधि सकिएकाले त्यो गर्न पाएनन् । अहिले आफू नभएकाले मुटु उपचार केन्द्र बन्न नपाएको भनी नयाँ भीसीको बदनाम गराउन थालेका छन् । मन्त्रालयको स्वीकृतिविना नै होष्टल निर्माण गर्न किन दिइएको भन्ने दृष्टिको प्रश्नमा रजिष्टार श्रेष्ठले भने–आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो । आन्तरिक स्रोतमा पैसा थियो । त्यही अनुसार होष्टल निर्माणका लागि बजेट पनि छुट्याइएको थियो । तर अहिले नयाँ उपकुलपतिले अरु अरु काम गरेपछि आन्तरिक स्रोत घटेको हो । अहिलेका उपकुलपति आएपछि होष्टल भवन निर्माणको बजेट कम भएको हो ।
सीडीओको सहयोगमा निकालियो
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा डा. दासले कति धेरै पदको दुरुपयोग गरेर बसेका रहेछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण उनलाई प्रतिष्ठानको भीभीआईपी क्वाटरबाट निकाल्न सुनसरी जिल्लाका सीडीओले नै पत्र लेख्नुपरेको घटनाले पुष्टी गरेको छ । उपकुलपति जस्तो मर्यादित पदबाट बिदा लिन लाग्दा उनले आफ्नो साविकको बंगलाबाट सरेर प्रोफेसरहरु बस्ने घरमा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर उनले जानेबेला प्रतिष्ठानमा आउने अति विशिष्ट पाहुना बस्ने बंगला ओगट्न पुगे । सो बंगलामा सर्नुअघि आफ्नो तजविजमा झण्डै २० लाख खर्च गरी रंगरोगन, फर्निचर र कार्पेट हाल्न लगाएका थिए । सो प्रतिष्ठानको भीभीआईपी बंगलामा बस्न उनले कार्यसमितिको बैठकबाट नै जवर्जस्ती पास गराएका थिए । तर सो वैठकमा रजिष्टार कुलबहादर श्रेष्ठले भने हस्ताक्षर नै नगरी हिंडेको बताउँछन् । सीडीओवाट पत्र पाएपछि गत साउन २५ गते प्रतिष्ठानकै १५५ नम्वरको प्रोफेसर क्वाटरमा सरेका दासले भीभीआईपी क्वाटरको फर्निचर, ल्यापटप, मोवाइल,कडलेस लगायत थुप्रै सामानहरु भने अझै नवुझाई गायव पारेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । नियम विपरीत भीभीआइपी क्वाटर दिने निर्णय किन गर्नुभयो भनेर रजिष्टार श्रेष्ठसँग बुझ्दा उनले कार्यकारी समितिकै निर्णय अनुसार तत्कालीन भीसी दास भीभीआइपी क्वाटरमा सरेको प्रतिक्रिया दिए । त्यतिबेला कार्यकारी समितिकै निर्णय अनुसार भीभीआइपी क्वाटर दिइएको हो, नयाँ भीसी आएपछि त्यो निर्णय रद्द भयो, उहाँ सरिसक्नुभएको छ । उहाँलाई सार्न सीडीओकै सहयोग लिनुपरेकोबारेमा रजिष्टार श्रेष्ठले भने, खै मलाई त सीडीओको सहयोग लिएको थाहा छैन । सीडीओलाई पत्र पठाएको सुनेको चाहिँ हुृ । रजिष्टारले नै सबैथोक गर्ने होइन भन्ने जिज्ञासामा उनको भनाइ थियो–‘अहिले मलाई केही थाहा हुँदैन, सबै काम उपकुलपतिको सचिवालयबाट हुन्छ ।’
फार्मेसी विषयका प्राध्यापक रहेका दास हिजोआज आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिई काठमाडौमा वसेर प्रतिष्ठानलाई कसरी धरासायी वनाएर उपकुलपतिको बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । उनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका विभागीय प्रमुख जीवी रौनियार दुखेसो पोख्दै हिंड्ने गरेका छन् ।
अख्तियार निर्देशकहरुको सरुवा
आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिज्ञहरु जस्तै साम दाम दण्ड भेद अपनाउन खप्पिस डा दासकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका दुई निर्देशकहरुको समय नपुगी सरुवा भयो भन्दा अपत्यारिलो कृुरा लाग्न सक्छ तर कुरा सत्य हो । २०७२ सालमा पूर्वका अख्तियार निर्देशक भएर आएका डुल्लुराज बस्नेतले दासको पालामा भएका आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न प्रतिष्ठानमा छापा मारेर एक ट्रक कागजपत्र जफत गरेका थिए । त्यसको नतिजास्वरुप दासले झण्डै ८ करोडको भ्रष्टाचार गरेको विगोसहित केन्द्रमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरी फायल पठाएको थियो । तर बस्नेतले फाइल पठाएको १ बर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाउनुको साटो उल्टै तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिह कार्कीले दास बाट ३ करोड रुपैयाँ घुस खाएर बस्नेतलाई रातारात हेटौंडा सरुवा गरिदिएका थिए । तर डुल्लु बस्नेतको नजिकको मान्छे पर्ने वर्तमान प्रमुख आयुक्त दिप वस्न्यात आएपछि दासको फाइल खोलिन्छ भन्नृे धेरैको विश्वास थियो । तर उनले पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न नसक्नुले उनले पनि लोकमान सिंहबाट भागवण्डा पाएको अख्तियारभित्रै ठुलो चर्चाको विषय वनेको छ ।
डुल्लु बस्नेत हिंडेपछि पूर्वको निर्देशक भएर ८ महिनाअघि प्रेमप्रसाद भट्टराई आएका थिए । भट्टराई आउँदा प्रतिष्ठानमा मातृशिशु अस्पताल भवन निर्माणमा भएका घोटाला, डिजेल काण्ड लगायत विद्यार्थी भर्नाकाण्डको उजुरी परेको आधारमा छानबिन थालेर कारबाहीको लागि केन्द्रमा पठाएका थिए । यसैबीच गत साउन १५ गते प्रेम भट्टराईले यसबारेमा डा. दास उम्कन नसक्ने भनी एउटा अललाइन अखवारमा अन्तर्वार्ता दिएको पर्सिपल्ट नै उसलाई केन्द्रमा तानिएको थियो । भट्टराईलाई किन केन्द्रले रातारात सरुवा ग¥यो भन्नेबारे एकीन नभए पनि यता दास भने आफूले सवैको मुख थुनिसकेको हुनाले यस्ता सानातिना हाकिमहरुले केही गर्न नसक्ने भन्दै हिड्न थालेका छन् ।
डा.केसीका कारण वीपीमा जाँचबुझ शुरु
चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अनियमितताविरुद्ध पटक पटक अनसन बस्दैआएका डा गोविन्द केसीको १० औ आमरण अनसनको १० सूत्रीय मागमध्ये धरानको वीपी प्रतिष्ठानमा डा दासले गरेको आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि एक थियो । सोही मागलाई पूरा गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा प्रा. डा.उपेन्द्र देवकोटा तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा जाँचवुझ आयोगको गठन गरेको थियो । सो आयोग २ बर्ष सुतेर बसे पनि यसपटक भने गतहप्ता धरान आएर प्रतिष्ठानवाट सन् २०१२ सालमा डा. दासले एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नामा प्रश्नपत्र आउट गरी ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको विषयमा सम्बन्धित आवश्यक कागजात र प्रश्नपत्रहरु पनि लिएर गएका छन् । धरान आएका आयोगका संयोजक कार्कीले प्रतिष्ठानले तत्कालीन अवस्थामा लिएको परीक्षामा भएको यथार्थता र देशका अन्य स्थानमा भएका त्यस्तै विषयको समेत छानबिन गरी सत्यतथ्यसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि आफूहरुले ती महिनाको समय पाएअनुरुप वीपी प्रतिष्ठानको कागजात लिएको पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।